landa u-Touch VPN -Free Unlimited VPN Proxy & WiFi Privacy ngu-TouchVPN Inc. apk yakamuva kakhulu app yamadivayisi we-android
Vulela sites nge Touch i-VPN ivuswe - the free, fast & okuphephile i-VPN! Surf ngokukhululekile manje!
Khipha I-Apk (14.75 MB)
Ayikwazi ukufinyelela amanye amawebhusayithi noma izinhlelo zokusebenza? Ngabe uyakhathazeka nge-olungavikelekile Wi-Fi ezidonsela kuzo? Ufuna sibe engaziwa futhi bavikelekile ukubhekwa kanye kubaduni? Touch i-VPN - ikhambi best for you!
Public Wi-Fi akuphephile. Noma yini ukuthumela noma ukuthola kumadivayisi yakho ephathekayo WiFi yomphakathi kungenziwa abamba, okwenza ulwazi lwakho lomuntu siqu ezifana amaphasiwedi wakho, izithombe, idatha yohlelo lokusebenza kanye neminye imininingwane eyimfihlo abasengozini kubaduni.
Touch ye-VPN sivale ngokuzenzakalelayo WiFi yomphakathi zibe uphephile futhi uvikelekile ku-Wi-Fi ezizimele. zokuvikeleka mobile Your, ubumfihlo kanye nolwazi oluqondene uyovikelwa kubaduni, ukwebiwa kwemininingwane yabo nokuzingelwa neminye imisebenzi ezinonya lapho sithola kwinethiwekhi ye-WiFi yomphakathi.
Touch VPN powered by ngomunye wemikhakha ethenjwayo kunazo ubumfihlo, ukuphepha kanjalo nezinhlelo oletha ungeno - Hotspot Shield.
<b> Imibiko Evelele Yonyaka Touch i-VPN ivuswe:
<b> ✓ Khulula: 100% free. Alukho ulwazi credit card oludingekayo. Ayikho izilingo wanikela.
<b> ✓ Unlimited: angenamkhawulo Ngiqinisile. Cha session, isivinini noma bandwidth ukulinganiselwa.
<b> ✓ Simple: Vulela emhlabeni nomunye nje touch of inkinobho "Connect".
<b> ✓ okuphephile: Ukubhalwa kwe-SSL lwethu oluqinile luyoba kukwenze engaziwa ngokugcwele futhi kuvikelwe.
<b> ✓ Ukusekela: Uma uneminye umbono wakho noma iziphakamiso, sicela uthumele i-imeyili ku: [email protected]!
<b> ■ Kuyini VPN
I-VPN imele isengezo senethiwekhi ezimele. Uma uxhuma kunoma iseva ye-VPN ngokusebenzisa Touch i-VPN ivuswe isibonelo - it omisa esethole futhi ibethelwe Uxhumano kwiseva kwelinye izwe. Ngenxa inqubo yokubhala ngemfihlo idatha ayikwazi elicwengekileyo noma ivinjwe. Uma uhlala eSweden isibonelo, lapho ukuxhuma kwi-server ye-VPN e US, traffic lakho ngabe unjani ozayo evela e-United States, esikhundleni Sweden.
<b> ■ Kungani usebenzisa VPN
With VPN, awukwazi nje ukuvulela amasevisi geo-nomkhawulo noma zazihlolwa, ezifana Facebook, Pandora and Youtube; ubumfihlo bakho inthanethi kanye nokuvikeleka luzoqiniswa kakhulu njengoba uyobe surf web ngokuyimfihlo ngokuphelele.
<b> ■ i-VPN ivuswe vs. Proxy
VPN Proxy kungaba kokubili afihle ukuthi ungubani umsebenzisi ngokusebenzisa kabusha umzila internet yakho traffic futhi ushintshe IP yakho. Seseva Noma kunjalo, ngokuphelele isiphequluli esekelwe, noma ngabe usebenzisa Chrome, Safari, noma i-Firefox; futhi kungase kungabi iyahambisana amakhasi athile ewebhu ezisebenzisa ubuchwepheshe non-browser. Ngokungafani Proxy, kwinsizakalo ye-VPN ngemfihlo zonke izimoto zakho, futhi ngeke basebenze nazo zonke izinsizakalo internet. Kafushane, i-VPN ivuswe izokunikeza inkululeko inthanethi, ubumfihlo kanye nokuvikeleka.
<b> ■ Kungani Touch i-VPN ivuswe
Touch VPN 100% free, unlimited, esethole futhi super lula ukuyisebenzisa. Ungaxhuma kunoma yikuphi amaseva ngezansi (Sweden, United Kingdom, mazwe iDenmark, iFrance, United States, eNetherlands, futhi Canada) ukuze ukujabulela unlimited ubumfihlo inthanethi kanye nenkululeko. Nge-VPN ivuswe Touch ongakwenza
<b> ⇨ Finyelela yimuphi website kunoma yiliphi izwe. Dula geo-nemingcele ukuvulela iyiphi iwebhusayithi noma ngabe ukuphi! Thola ukufinyelela amasayithi avinjiwe noma lihlolwe nguhulumeni, esikoleni noma emsebenzini. Gwema izibhulamlilo ukuvulela Facebook, amavidiyo we-YouTube, futhi igweme VOIP ukulinganiselwa.
<b> sekuseni ukuvikela idatha yakho kusuka Kubaduni. Uma uxhumeke kwi-Wi-Fi yomphakathi Hotspot, igama, amaphasiwedi, kanye nolwazi lwakho siqu kungenziwa kalula ayekethisa. Touch ye-VPN ibethela idatha yakho bese inikeza wena nge banking-level ukulondeka uthole ukuvikeleka okungcono kakhulu.
<b> ⇨ Touch VPN elilodwa uchofoze i-VPN Proxy Service. Touch i-VPN ivuswe iqukethe inkinobho eyodwa kuphela. Inkinobho lebhokisi wena omunye amaseva amaningi engaziwa, aphenduka ngejubane elingafani ngesivinini esingaphezu proxy web. Uma kungukuthi egijima lokusebenza yethu thina sikusize ugcine amadivayisi akho ibhethri. Futhi, singamalungu VPN angenamkhawulo ngokuphelele futhi free!
<b> ⇨ Surf the Web ngokungaziwa. Gwema ukuthi ungabonwa ISP yakho futhi uvimbele amawebhusayithi kusuka ukulandela ngomkhondo isikhangiso nokukhomba. Touch ye-VPN kushintsha ikheli lakho le-IP, ngakho ubuwena inthanethi kuyinto engaziwa futhi umsebenzi wakho inthanethi ezingafinyeleleki prying amehlo kanye namabhizinisi.
Browser Anti Blokir 2019
Ar Emoji 3D Emoji Avatar Animojis Fun your Chat
I-Android Accessibility Suite
KeepLock - Lock Apps & Protect Privacy?
GBWhat's New Version
Thermal Camera HD: Infrared Vision
YO Wsapp plus Latest Version
Effects videos - Fast, slow motion Video